सांसदको प्रश्न–लिपुलेकको विषय किन उठाइएन ? प्रधानमन्त्री– हामी सवै टुंग्याउँछौँ| Nepal Pati
सांसदको प्रश्न–लिपुलेकको विषय किन उठाइएन ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ– हामी सवै विषय टुंग्याउँछौँ
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका छन् । मंगलबारको बैठकमा ओलीले भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदलाई प्रश्न भए राख्न समय दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद वडुले प्रश्न गरे–विगतका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी चाहियो ? भारत भ्रमणको बेला र चीन भ्रमणको बेलामा पनि लिपुलेकको विषय किन उठाइएन ?
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने–
मैले आफ्नो वक्तव्यकै क्रममा भनेँ–यस पटक हामीले सरकारी तवरमा १३ वटा र निजी तहमा ९ वटा गरेर २२ वटा सहमति ग¥यौँ । र प्रोटोकलको विषय सन् २०१६ को मार्चमा म प्रधानमन्त्री भएर जाँदा जे समझदारी गरिएको थियो, त्यसको लगत्तै जसो म सरकारबाट हटेँ । पहिलो त ट्रान्जित ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट कहाँ छ भनेर खोज्दै समय लाग्ने गरी कुन पत्रमुनी परेको थियो, त्यसलाई निकालियो । र धुलो टक्टक्याएर त्यसलाई अगाडि बढाइयो ।
अलिकति छलफलको क्रममा बाँकी रह्यो । मैले स्पष्ट पारेको छु, आउँदो जुलाइमा यस सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार पनि हुन्छ, सम्झौता पनि हुन्छ । संयुक्त वक्तव्य अवश्य पनि माननीयज्यूहरूले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को एकदमै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभएको छ माननीयजीले । हाम्रो सीमा सुरक्षित हुनुपर्छ । हाम्रो सीमा कुनै पनि नाममा, कुनै बहानामा कुनै पनि हिसावले कसैसँग भूमिको, सीमाको लेनदेन हुँदैन । जोसँग हाम्रो सीमाना जोडिएको छ । उहाँहरु भन्दा सानो छ । सानो देशले छोडिछोडी सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदैन ।
र वर्तमान सरकारको धारणा–हामी कुनै पनि हिसावले आफ्नो सीमानाको सुरक्षा गर्छौ । तर, कतिपय विषय लामो समयदेखि पेन्डिङ छन् । कतिपय कुराहरू कसरी भए, ती कुराको अध्ययन गर्न मन्त्रालयगत, विषयगत अध्ययन गर्न पनि टाइम लाग्ने भयो । यतिकै कुरा उठाउनु र त्यसलाई टुंगोमा नपु¥याउनु र सवै कुरा उठाउनु र केही पनि निष्कर्षमा नपु¥याउनु उचित हुँदैन ।
मैले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा पनि कुरा उठाएको छु र त्यसका परिणामहरू क्रमिक रुपमा प्रकट हुन थालेका छन् । क्रमशः प्रकट हुँदै जानेछन् भनेर मैले बताएको पनि थिएँ । विराटनगरको क्याम्प उठेको कुरा, अव भोलिबाट डुवान सम्बन्धि संयुक्त टोली जाने कुरा, जल यातायात सम्बन्धि अध्ययनको टोली खटिरहेको कुरा, रेल्वे सम्बन्धि सर्वे टोली आइसकेको कुरा, ती कामहरूलाई अगाडि बढाइसकिएको आदि कुरा पनि मैले भनेको थिएँ ।
ती परिणमहरू देखिदै गएका छन् । एयर इन्ट्री रुटका कुराहरूमा परिणाम देखिएको छ । चीन सम्बन्धि कुराहरूमा पनि म प्रश्नकर्ता माननीयज्यू र मननीयज्यूहरू सवैलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने– हामीले यसमा कुनै राजनीति गर्नु छैन् । यो देशको प्रश्न हो । हामी देशलाई माया गर्छौँ । र हाम्रो पुस्ताले देशको रक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रो पुस्ता देशको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने होइन । इतिहासका कालखण्डमा हिजो भएका कतिपय अनुचित कुराहरू छन् भने अव २१ शताब्दीका मुल्य र मान्यताहरू, २१ औँ शताब्दीका अवधारणाहरू, राष्ट्रहरू बीचका २१ औँ शताब्दीका धारणाहरू वा विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने २१ औँ शताब्दीका तरिकाहरू, मापदण्डहरू वा विधिहरू हिजोको जस्तो रहेन, हामी यी सवै कुराहरूलाई टुंग्याउन सक्छौँ । त्यसकारण अहिलेको भिजिटको आसपास वा यो सरकार बनेपछि केही पनि बिग्रन दिएको छैन् पहिलो कुरो ।
यसअघि केही बिग्रेको रहेछ भने जस्तैः केहीकेही ठाउँका सीमा विवादका पक्ष, ती पारस्पारिक, तथ्यपरक ढंगले अध्ययन गरेर आफ्नो सीमाको सुरक्षा गरेर, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गरेर यी विषयको टुंगो लगाइन्छ । विगतमा कमी भएका होलान, रहेछन् भने अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष समुचित ढंगले निकालिन्छ । र अगाडि बढिन्छ । सभामुख महोदय, यहाँलाई धन्यवाद ।